Andrasana ny fananganana azy ho Olomasina - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Manitikitika ny sain’ny kristianina ny fivoaran’ny fanadihadiana momba ny fananganana ho Olomasina an’i Victoire Rasoamanarivo. Namahavaha manodidina izany i mompera Randrianoelisoa Joseph Noël, aomonien’ny lasapelina Victoire ao Andohalo. Jery todika sy fanazavana.
Midika ho fihamafisan’ny finoana ny hamaroan’ny olona mandeha eny amin’ny lasapelin’i Victoire Rasoamanarivo. Miandrandra fahasoavana izy ireo ka tonga mangataka miaraka amin’i Victoire. Azo amintinina momba ny lanjan’i Victoire eo amin’ny fiainam-pinoan’ny kristianina izany, araka ny nambaran’i mompera Randrianoelisoa Joseph Noël. Ny fiantsoana fotsiny an’io fanampin’anarana Victoire io no mahazatra, fa ilay vehivavy lahika malagasy, Victoire Rasoamanarivo eto no resaka. Ilay nasandratry ny Papa Joany Paoly 2 ho Olontsambatra tamin’ny 30 apirily 1989. Andrasana ankehitriny ny fananganana azy ho Olomasina.
Ny niandohan’ny fanadihadiana
Tamin’ny taona 2005 no nanomboka ny fanadihadiana momba an’i Victoire, niaraka tamin’ny an’i mompera Jacques Berthieu. Ny kardinaly Razafindratandra Armand Gaëtan no ariseveka teto amin’ny diosezin’Antananarivo tamin’izany. Nanaovana antso, nalefa tamin’ny Radio Don Bosco, ny fanentanana ireo manana fahasitranana tamin’ny fomba mahagaga, teo amin’ny aretim-batana. Niangaviana izy ireo hanatona ny tompon’andraikitra. Dia teo no nitondran’ny ray aman-dreniny an’i Angelique Soafinaritra: zazavavy kely sitrana noho ny vavaka hasivian’andro natao. Zanak’olona miasa amin’ny toeram-pitsaboana eny Ambohimahitsy Ambohimangakely izy. Teraka tamin’ny taona 1998 i Angelique ary tratran’ny aretina atao hoe “hydrocéphalie”, aretina mahazo ny loha: miseho amin’ny fitombon’ny rano ao amin’ny atidoha ka mampitombo ny haben’ny loha.
Vita ny fanadihadiana. Nalefa tany Roma ny boky mirakitra izany. Niainga tamin’ny 20 pejy aloha ny voalohany saingy tsy nety. Avy eo nojerena lalindalina kokoa ny zava-misy. Ary dia niafara hatrany amin’ny 300 pejy ny tatitra, rahefa niverenana fanintelony ny fandrafetana milamina azy.
Voarakitra ao amin’ny tahirin-kevitra fanadihadiana ny momba ny ray aman-drenin’ny ankizy. Ao koa ny vavolombelona nahita ny fandehan’ny aretina sy ny olona manakaiky azy, ny olom-piangonana ary ireo dokotera nitsabo azy. Ao ihany koa ny sary misy ny zaza fony izy narary, ny dingana samihafa natao tamin’ny fitsaboana.
Hita fa aretim-batana tsy sitram-panafody ary nahafa-nenina ny dokotera tamin’ny fitsaboana azy ilay niseho. Nanontaniana ny ray aman-dreniny momba ny nataon’izy ireo ka nahatonga ny fahasitranana. Nampiasaina ny rano voahasina nalaina teny amin’ny “sanctuaire” misy an’i Victoire. Nanaovana vavaka hasivian’andro, ary tamin’izany no nahasitrana tampoka ny aretina ka nahataitra ny ray aman-dreniny. Nojeren’ny dokotera izay nitsabo azy izany ary resy lahatra ireo fa tena fahagagana tokoa no nitranga. Io no tranga hitan’ny kardinaly fa niharihary indrindra ka nanaovana ny fanadihadiana lalina.
Ny vikera jeneraly, i mompera Ravelonantoandro Marc, no nitondra an-tanana ny dosie ary nisy fifandraisana tsy miato tamin’ny taty Madagasikara manazava izay tsy mazava. Misy rafitra moa any Roma mandray an-tanana manokana ny tranga fanadihadiana ho fananganana Olomasina tahaka ireny.
Lalina ny fanadihadian’i Roma
Noheverina fa efa milamina ny fandehan-javatra tamin’ny 2012 ary efa nanantena ny maro fa hatsangana ho Olomasina i Victoire saingy tsy izay no nitranga. Ho an’ny tany andafy araka ny fanazavana, dia hoe aretina sitram-panafody io “hydrocéphalie” io any. Ilay hasivian’andro teo amin’ny faha 8 andro anefa no nahasitrana azy. Fa tamin’ny dian’ny evekantsika farany teo, tamin’ny “visite ad limina”, dia nihetsika indray ny dosie Victoire. Noresahan’ireo eveka tamin’ny Papa Fransoa ny zava-misy aty amintsika ny amin’ny firohotry ny olona amin’ny fanatonana an’i Victoire. Nisy fotoana aza ny Papa nandefa olona taty nijery izany. Mila porofo manko ny firosoana amin’ny dingan’ny fananganana Olomasina (Zahao “Tsara ho fantatra”, Lakroa tamin’ny 27 apirily 2014, p8)
Mitady fahasoavana am-bavaka ny olona
Fasana moa tany am-boalohany io nasiana an’i Victoire io fa taty aoriana vao lasa “sanctuaire”, toerana masina. Tamin’ny taona 2000 no nanomboka nisy lamesa tao, rahefa lasa Olontsambatra i Victoire. Ny zanak’i Masina Maria no nanao raozery tao isaky ny sabotsy, fa ny sisa dia mamangy fasana fotsiny.
Ny firohotry ny olona nankeny no nahatonga ny kardinaly Razafindratandra hametraka olona hikarakara ny toerana ho lasa “sanctuaire”, hatramin’ny 2005 nahatongavan’i mompera Joseph Noël. Ankehitriny, misy lamesa isan’andro ao, ny alatsinainy ka hatramin’ny sabotsy, miditra amin’ny 7 ora latsaka fahefany ary misy pretra mifandimby miandraikitra izany. Ny alahady dia ny tolakandro no misy lamesa. Ahitana olona manodidina ny 60 eo ho eo isan’andro, fa ny sabotsy: mihoatra lavitra izany satria feno olona hatraty an-tokotany.
Pretra dimy mirahalahy ankehitriny no miara-mikaon-doha amin’ny fanarahana ny dosie Victoire mifandray amin’ilay resaka fahasitranana mahagaga. Ny atao amin’izao dia ny mifandray amin’ireo dokotera nitsabo an’i Angelique, mba hiomana amin’izay mety ho fiantsoan’ny any Roma. Misy telo moa izy ireo dia ny Profesora Casimir, ny Profesora Catherine ary ny Dokotera Léonide. Ireo no hiresaka amin’ny dokotera any Roma, hanazava ny fandehan’ny zavatra taty. Dia izay no andrasantsika amin’izao. Ary jerena akaiky ny fahasalaman’i Angelique Soafinaritra. Ahitana fa tena tsy miverina tokoa ilay aretina. Ny tena olana manko dia tratran’ny aretina “bilharziose” sy ny “cysticercose” izy, dia noheverin-dry zareo fa ilay aretina no niverina. Efa sitrana anefa ireo amin’izao ary fantatra mazava ny antony nahatonga ireo fa tsy misy ifandraisany amin’ilay “hydrocéphalie”.
Atao totoafo ny vavaka
Mifarana ny 24 aogositra ny taom-pankalazana ny faha 120 taona nahaterahan’i Victoire any an-danitra, araka ny voambolana ampiasaina. Taratry ny finoana ny fitsanganan-ko velona toa an’i Kristy izany. Fa ny fanohizana ny vavaka dia tsy ankiato. Antenaina tsy ho ela intsony ny fananganana azy ho Olomasina.